Muxuu tababare Solskjaer ka yiri wadahadalada u dhexeeya Paul Pogba iyo Manchester United? – Gool FM
Muxuu tababare Solskjaer ka yiri wadahadalada u dhexeeya Paul Pogba iyo Manchester United?
Dajiye July 24, 2021
(Manchester) 24 Luulyo 2021. Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka hadlay wadahalada u dhexeeya maamulka kooxda iyo Paul Pogba, kaasoo ku aadan cusbooneysiinta qandaraaska uu ku joogo garoonka Old Trafford.
Qandaraaska Pogba ee kooxda Manchester United wuxuu dhacayaa xagaaga sanadka soo socda, United ayaa dooneysa inay qandaraaska u kordhiso si loo hubiyo joogitaanka ciyaaryahanka reer France, ama inuusan bilaash ku bixin xilli ciyaareedka soo socda haddii uusan dooneyn inuu sii joogo.
Haddaba wargeyska “Manchester Evening News” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, wuxuuna yiri:
“Wadahadal ayaa u socda wakiilada Paul Pogba iyo kooxda, dhamaan wada hadaladii na dhex maray aniga iyo Pogba waxay muujinayaan inuu eeganayo xilli ciyaareedka.”
“Had iyo jeer waxaa jira warar la isla dhexmarayo oo ku saabsan Pogba inuu sii joogayo ama uu baxayo, markasta waxaa jira kooxo xiiseynaya, dabcan waxaan aragnay Pogba oo ku jira waqtiyadiisii ugu fiicnaa, wuu ogyahay sida aan ka dareemayno, waan ku riyaaqay waqtigeygii aan la shaqeynayay, waxaan rajeyneynaa inaan awoodno inaan sii wada shaqeyno.”
Si kastaba ha ahaatee, Paul Pogba ayaa u dhaqaaqay kooxda Manchester United bishii August 2016 isagoo ka yimid Juventus, tan iyo markaasna wuxuu ka qeyb galay 206 kulan, isaga oo dhaliyay 38 gool, wuxuu sidoo kale asxaabtiisa ka caawiyay 42 gool.
“Haaland wuu ka fog yahay heerka Mbappé” – Xiddig hore kooxda Borussia Dortmund ah
"Ma rabno inaan halkaan kugu aragno" - Taageerayaasha PSG oo fariin culus u diray Paul Pogba & Sababta ay ku diidayaan inuu kusoo biiro oo la ogaaday